Caanka Cusub ee Apple Fitness + "Waqtiga Socodka": Prince William | waxaan ka imid mac
Caanka cusub ee Apple Fitness + "Waqtiga Socodka": Prince William
Manuel Alonso | | Apple Watch, Alaabada Apple
Habka ay Apple ku ogaatay inay kugu dhiirigelinayso inaad si fiican u socoto waxa loo yaqaan "Waqtiga Socodka". Fitness + iyo Apple Watch ayaa kaa caawin doona inaad jimicsi sameysid halka qofka caanka ah uu la wadaagayo sheekadooda, sawiradooda iyo muusigooda. Shirkadda Maraykanka ayaa hadda cusbooneysiisay liiskeeda dadka caanka ah ee markhaatiga bixinaya ku saabsan Amiir William ee Ingiriiska.
Tani waa sida Apple lafteedu u qeexayso:
Socodku waa dhaqdhaqaaqa jireed ee ugu caansan adduunka, waana mid ka mid ah waxyaabaha ugu caafimaadka badan ee aan u qaban karno jirkeena. Socodku inta badan wuxuu noqon karaa wax ka badan jimicsi - waxay kaa caawin kartaa nadiifinta maskaxdaada, xallinta dhibaatada, ama soo dhawaynaysa aragti cusub. Xataa inta lagu jiro muddadan adag, hal hawl oo ay dad badani heli karaan waa socod. Wakhtiga Socodka, waxaanu todobaadle u keenaynaa nuxurka asalka ah ee Apple Watch on Fitness + oo ay ku jiraan qaar ka mid ah martida ugu kala duwan, soo jiidashada iyo damaashaadka leh oo bixiya dhiirigelin iyo madadaalo si aan uga caawino isticmaalayaashayada in ay ku sii socdaan awooda socodka.
Amiir William ayaa lagu dhawaaqay inuu yahay martida caanka ah ee soo socota ee Time to Walk, oo leh codkiisa Apple Fitness +, kaas oo sidoo kale hawada ka sii deyn doona Apple Music 1. His Royal Highness ayaa duubay cod 21-daqiiqo ah adeegga. Waxa kale oo ay ku darsataa doorashada muusik 16-daqiiqo ah. Isu geyn ku dhawaad ​​40 daqiiqo socod wanaagsan oo maskaxdaada nadiifi.
Amiir William wuxuu ka hadlayaa muhiimada ay leedahay maskax ahaan taam. Waxa uu sidoo kale milicsadaa daqiiqad farxadeed markii laga soo saaray aagga raaxada, qiimaha dhegeysigu u leeyahay hab lagu xoojiyo kuwa kale. Khibrad u horseeday inuu mudnaanta siiyo caafimaadka maskaxda.
Sidoo kale waa muhiim in la ilaaliyo caafimaadka maskaxda iyo sidoo kale jirka. Runtii aad bay isugu xidhan yihiin. Sababtan awgeed, ma jiraan wax ka fiican in la daryeelo mid lugeynaya oo uu hagayo sharafta Ingiriisiga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Alaabada Apple » Apple Watch » Caanka cusub ee Apple Fitness + "Waqtiga Socodka": Prince William
Apple TV + si ay u soo saarto Grateful Dead biopic oo uu hagayo Martin Scorsese
Awoodda AirPower hadda, cayayaan ku ah qaar MacBook Pros ah, iyo in ka badan. Todobaadka ugu wanagsan SoydeMac